Kia EV6 Ugbu a meriri ụgbọ ala nke afọ na 2022 Kedu ụgbọ ala? Ihe nrite
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Kia EV6 Ugbu a meriri ụgbọ ala nke afọ na 2022 Kedu ụgbọ ala? Ihe nrite
Kia EV6 emeriela ihe nrite 'Car nke Afọ' n'ozuzu ya na ọmarịcha 2022 Kedu ụgbọ ala? Onyinye, n'akụkụ ịbụ 'Electric SUV of the Year'. Mmeri a akụkọ ihe mere eme maka ụgbọ ala eletrik mbụ nke Kia raara onwe ya nye bụ naanị oge nke abụọ EV meriri kedu ụgbọ ala? Okpueze 'Car nke Afọ' ka Kia Niro EV gachara na 2019.
Ihe ngosi 'Car nke Afọ' ọhụrụ maka Kia EV6 na-esochi ọnụ ọgụgụ ihe nrite na nkwanye ùgwù sitere n'aka ndị ọkachamara na aha mgbasa ozi mba ụwa na-eduzi echiche n'ime ọnwa 10 kemgbe ebubatara ụgbọ ala ahụ n'ụwa niile na March afọ gara aga.
"EV6 na-ejikọta nnukwu ụwa n'ezie na ikike ịgba ụgwọ ọsọ ọsọ nke onye ọ bụla na-emegide ya nwere ike ịkwado ya, na-ekwupụta nchegbu abụọ kachasị na ndị mmadụ ka nwere banyere ụgbọ ala eletrik. Ihe ọzọ bụ, site n'iji bespoke electric underpinnings kama set nke a na-akọrọ site petrol na dizel ụdị, Kia enwewo ike iji ohere nke kọmpat size nke electric Motors ma mepụta ụgbọ ala nke dị nnukwu mbara na nke bara uru, "Steve Huntingford, Editor kwuru. nke Kedu ụgbọ ala? magazin. "Tinye na arụmọrụ na-enweghị mgbakasị, nzigharị pụtara ìhè, ọnụahịa asọmpi na otu n'ime akwụkwọ ikike kacha mma gburugburu, na EV6 dị egwu anaghị adị ka ọdịnihu - ọ dịkwa ya ka ọ dịkwa."
"Ọ bụ nnukwu ihe ùgwù maka Kia ị nweta 'ụgbọ ala nke afọ' n'ụgbọ ala kedu nke afọ a? Onyinye, ma gosikwa ọzọ ka ntinye atụmatụ anyị siri wepụta oke ngwaahịa Kia na-akwụ ụgwọ n'ezie. EV6 bụ ụgbọ ala pụrụ iche, na-egosipụtakwa nlebara anya anyị na-enweghị mgbagha n'ịghọ onye na-eweta ihe ngwọta ngagharị na-adigide zuru ụwa ọnụ, "Ho Sung Song, Onye isi ala na onye isi ala na ụlọ ọrụ Kia kwuru. "Atụmatụ anyị ime ka ọkụ anyị dị elu na-abawanye ma na-agụnye ụdị 11 ọhụrụ BEV site na 2026 dị ka akụkụ nke atụmatụ S atụmatụ anyị, ebe, ka oge na-aga, ụgbọ ala eletrik ga-abụ ihe ka ukwuu n'ahịa anyị zuru ụwa ọnụ."
The EV6 na-eweta ogologo nso, efu-emissions ike, 800V ultra-ngwa ngwa chaja na pụrụ iche styling na crossover SUV ahịa. EV6 na-enyere ụgbọ ala ahụ aka iru ihe ruru kilomita 528 nke ịnya ụgbọ ala site na otu ụgwọ na okirikiri WLTP jikọtara ọnụ, ebe teknụzụ chaja 800V dị elu pụtara na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịkwụ ụgwọ site na pasent 10 ruo 80 n'ime naanị nkeji iri na asatọ.
Ngwa Ọgwụ Ọhụrụ Ọgwụgwọ nke Tumor siri ike dị elu
Ịfefe na mbara igwe nke Hawaii dị nnọọ nchebe